२०७८ आश्विन २७, बुधबार २०:१९:००
प्रचण्डको ओरालो यात्रा, किन दिन्छन् आफु माथि कमजोर अभिव्यक्ति !
गत भदौ २३ गते सुरेश वाग्ले र भीमसेन पोखरेलको २२औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले हिनता भाव प्रस्तुत गर्दै भने " हामी हिजो त्यत्रो सहिदको बलिदान, त्यत्रो त्याग, समाज रुपान्तरण र क्रान्तिको निम्ति सम्पूर्ण समर्पण गरेर हिँड्ने पार्टी आज एमाले जस्तै भइयो भने त, यो पार्टीको आवश्यकता र औचित्य नै के रह्यो र?बरु त्यो भन्दा राम्रो त यस्तो पार्टीलाई विघटन गरिदिनु हुन्छ। "
लाग्छ,नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड जतिको नेताबाट यो किसिमको अभिव्यक्तिको अपेक्षा कमैले गरेका थिए,खैर उनले बेलाबेला यस्ता खालका अबिब्यक्ति दिने गरेका छन् ।उनका अभिव्यक्तिका सन्दर्भ केलाउँदा उनको निराशाको केन्द्रमा देखिन्छ।।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् नियमित सञ्चालन गराउनका लागि नेकपा (एमाले)सँग छलफलको लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
संसद् चलाउनका लागि संवादको विकल्प नभएकोले सरोकारवाला सबै पक्ष संवादमा आउनुपर्ने उनले बताए ।
नेकपा एमालेलाई फुटाउन सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले निरन्तर संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।‘मैले फेरि फर्केर सबै कामको समीक्षा गर्ने कुरा हुन्छ, उहाँहरुले पनि समीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ,’ बुधवार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सभामुख सापकोटाले भने, ‘हामी सबैले समिक्षा गरौं र सकारात्मक सोचका साथ संवाद थालौं ।’ जतिसुकै ठूलो समस्या भएपनि संवादको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन र पूजा अर्चना ,हेर्नुस कुन कुन ?
राष्ट्रपति भण्डारीले अपरान्ह ४ः३० बजे नक्सालस्थित नक्साल भगवती मन्दिरमा पुगेर काठमाडौँस्थिति देवी मन्दिरको दर्शनारम्भ गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा मन्दिरमा उपस्थित पूजारी, उहाँहरुका परिवार र सर्वसाधारणलाई राष्ट्रपति भण्डारीले विजयादशमी २०७८ का अवसरमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उक्त मन्दिरका पूजारी खगेन्द्र निरौलाले राष्ट्रपतिलाई नवदुर्गाको प्रसाद र टीका लगाइदिँदै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि देशका खनिज पदार्थको उत्खनन् गर्न तथा मुलुकभित्रको अपार स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई मन्दिरका मूल पूजारी निलिक महर्जनले मन्दिर परिसरस्थित ऐतिहासिक ढुंगेधाराको दुरावस्थाका बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।
महाकाली राजमार्गमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु
महाकाली राजमार्गमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको डिलासैनीबाट सतबाँझतर्फ गइरहेको अन टेस्ट लेखिएको ट्र्याक्टर दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ तारलमा आज बिहान करिब १ बजेतिर दुर्घटना हुँदा सो ट्र्याक्टरका चालक डिलासैनी गाउँपालिका–३ का २३ वर्षीय योगेश पालको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी पोष्ट सतबाँझका प्रहरी जवान मोहन विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
मुगु दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति, मृतकका शव आफन्तलाई जिम्मा लगाइयो
काठमाडौँ । मुगुमा हिजो भएको बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछाने र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मुगुका हवल्दार सदस्य छन् । समितिले बस दुर्घटनाको छानबिन गरी प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले मनकामना मन्दिरको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । बडादसैँको आठाँै दिन आज मनकामना मन्दिरको दर्शन गर्न पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले मनकामना क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा सो कुरा बताउनुभएको हो ।
शिर्ष नेताहरुको दशैं टिका ,केहीलाई शोक केहीलाई हर्ष
काठमाडाैं । यसपटकको दशैंमा शिर्ष नेताहरुको केहीलाई आफन्त वितेर शोक परेको छ भने केही नेताहरुले परिवार आफन्तजनसँगै बसेर टिका ग्रहरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसपटकको दशैैंमा प्रचण्डले घरमै परिवारसँगै बसेर टिक ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी बाबुरा भट्राई पनि जन्मगाउँ गोर्खा नगइ बुबा उपचारका लागि काठमाडौं आएकाल काठमाडौंमै बसेर बुुबाको हातबाट टिका ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दसैं काठमाडौंमा नै मनाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनले दसैं मनाउने भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसवर्षको दसैं परिवारभित्र नै मनाउने भएका छन् । परिवारमा उनले छोरीहरू, ज्वाइँ नातिनातिनीसँगै नै उनले दसैं मनाउने तयारी रहेको छ । एमालेका पूर्व नेता वामदेव गौतमले यसपटक कोही सँगै पनि टीका लगाउने छैनन् । माइजुबाट टीका लगाउँदै आएका उनी यसपट माइजुको जुठो परेकोले टीका नलगाउने भएका हुन्
चाडपर्वकै समयमा किन हुन्छ बढी सवारी दुर्घटना?
काठमाडौं । दशैं खुशीयाली पूर्वक मनाउनुपर्ने अवस्थामा सडक दुर्घटनाको समाचारले सवैलाई दुखी तुल्याएको छ । हुन पनि पछिल्लो केहीदिन यता भएको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब ५० पुगेको छ भने यतिनै संख्यामा घाइते भएका छन् ।
घटस्थापनाको दिनदेखि सप्तरीको दिनसम्म मुगु,अछाम,कास्की स्याङजा र सिल्धुपाल्चाकमा भएका सवारी दुर्घटनामा ठूलो संख्यामा मानविय क्षति भएको छ । तथ्याङक हेर्ने हो भने विशेष गरी दशैंको अवधिमा बढि नै संख्यामा सवारी दुर्घटना भएको देखिन्छ ।
घर परिवार,आफन्त,इष्टमित्र जमघट भएर दशैं मनाउन भनेर खुशीका साथ घर हिड्को उनै दाजुभाई तथा दिदीहरु घर नपुग्दै सदाका लागि विदा हुनु परिरहेको छ । दुर्घटना हुनुमा यात्रु खासै दोषी हुँदैनन् तर उनीहरुले नै अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेको छ ।
साफ च्याम्पियनसिप : फाइनलमा स्थान बनाउन प्रतियोगितामा सहभागी नेपालबाहेक सबै टोली दबाबमा
फाइनलमा स्थान बनाउन प्रतियोगितामा सहभागी नेपालबाहेक सबै टोली दबाबमा थिए । नेपाल सबभन्दा सहज स्थितिमा थियो । तर, आइतबार राति भारतसँग पराजित भएपछि नेपाल एकाएक दबाबमा परेको छ ।
किन आत्महत्या गर्नेको संख्या वर्षेनी बढ्दै छ ?
कोरोना मानिसको डरसँग जोडिएको रोग बन्न पुगेको छ। डर, चिन्ता र पीरले मानिसलाई कमजोर र रोगी बनाउँछ।
कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा अधिकांश बेरोजगार भए। आफन्त गुमाए। धेरैलाई दुई छाक टार्न पनि धौँ(धौँ भयो। वर्तमान र भविष्यको चिन्ताले धेरैलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्याहरु देखिए।
परिणामस्वरुप महामारीको यो समयमा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भएको छ। त्यसो त आत्महत्याको घटना वर्षेनी बढ्दो छ। तर महामारीले यो समस्यालाई झनै बढावा दिएको देखिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले नै यो कुरालाई पुष्टि गर्छ।
दसैँको मुखमा मुगु दु:खान्त: यो दुर्घटना होइन, नियोजित हत्या हो
काठमाडौँ । दसैँमा परिवारसँगै मीठो मसिनो खाने रहर बोकेर नेपालगञ्जबाट घर फर्किने क्रममा मंगलबार ३२ मुगालीको ज्यान गयो । अरु केही गम्भीर अवस्थामा अस्पतालको शय्यामा छन् ।
यस्तै देशका अन्य भागमा पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेका, मर्मत नगरिएका र थोत्रा भइसकेका गाडी र बेहाल सडकका कारण ठाउँठाउँमा यसैगरी बस दुर्घटना भएका छन् ।
काठमाडौंबाट दोलखाको चरिकोटका लागि छुटेको बस लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डको ७ किलोमा खस्दा ३३ जना घाइते भएका छन् भने उता धनगढीबाट बाजुरा जाँदै गरेको बस डडेल्धुरामा ब्रेक फेल भएर पल्टिँदा १६ जना घाइते भएका छन् ।
दसैँमा घर पुग्न हरेकलाई हतार छ । लामो समय गाडी ग्यारेजका थन्क्याएका व्यवसायीलाई यही बेला सक्दो धेरै कमाउनु छ । अर्कोतिर गाडी ठीक अवस्थामा नहुनु र सडकको दुर्दशाले पनि दुर्घटना बढाएको छ । यसबीचमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कतै देखिँदैन । जनताको जिउधनको सम्पूर्ण जिम्मा यातायात व्यवसायी र चालकलाई छाडिएको छ ।
सिटिजन बैंकको रु २१ लाख ७० हजार लुटमा संलग्न एक नेपालीसहित तीन पकाउ
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सिया विपी चोकस्थित सिटिजन बैंकमा यही असोज २५ गते अपराह्न ३ः४५ बजे रु २१ लाख ७० हजार लुटपाट घटनामा संलग्न भई पक्राउ परेका तीन जनालाई आज यहाँ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार नेपाली नागरिक विराटनगर–८ का ३२ वर्षीय श्याम मुखिया, भारत अररिया सेखपुरा–५ का २८ वर्षीय सुनिल यादव र भारत अररिया गाराहा–४ का ३० वर्षीय विजय सहनी (गोली लागी घाइते)लाई सार्वजनिक गरिएको छ ।